Inye Osimiri Ukwu Bay, 100 Watt Led High Bay Light, 100W Na-esi na China emeputa
Nkọwa:Oke Osimiri Ukwu,Egwu 100 Watt dị elu,100W Na-enwu n'Ọdịnihu,100W Elu Bay,,
Home > Ngwaahịa > Elu Bay ìhè > 100 Watt Led High Bay Light
Ngwaahịa nke 100 Watt Led High Bay Light , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Oke Osimiri Ukwu , Egwu 100 Watt dị elu suppliers / factory, wholesale high-quality products of 100W Na-enwu n'Ọdịnihu R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
100W Led High Bay Replacement Bulbs 5000K  Kpọtụrụ ugbu a
ada ufo elu n'ọnụ mmiri 5000 kelvin  Kpọtụrụ ugbu a
Ngwongwo nke Aluminom Die-cast 100W UFO dị elu  Kpọtụrụ ugbu a
ufo duru ìhè mmiri dị elu 100W  Kpọtụrụ ugbu a
Ike anyị dị 480V Led High Light dị ntakịrị karịa ọkụ ọkụ dị elu. Nke a mere ka High Bay Nnọchi Bulbs nwere e fficient jụrụ Ọdịdị, ogologo ndụ na àgwà nke elu-ike ngwaahịa na-ekwe nkwa. Anyị 100w Led High Bay Light For Sale is s indety and quality...
ada ufo elu n'ọnụ mmiri 5000 kelvin 1. mee ka nnukwu ọnụ mmiri na- ebute n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ egwuregwu, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. Ufo nnukwu mmiri...
Ọnụahịa otu: USD 76.69 / Bag/Bags
Ngwongwo nke Aluminom Die-cast 100W UFO dị elu 1. mere ka e jiri nnukwu ọkụ mmiri mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ egwuregwu, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. ufo...
Atụmatụ nke eburu ìhè dị elu 1. mere ka e jiri nnukwu ọkụ mmiri mee ihe n'ọmụmụ ihe, ụlọ nkwakọba ihe, ụlọ egwuregwu, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa 2.IP65 mmiri na-adịghị ahụ maka eji ojiji, mmiri na ájá na-eguzogide ọgwụ. 3. ufo ada nnukwu mmiri...
China 100 Watt Led High Bay Light Ngwa
100 Watt Led High Bay Light bụ Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ụlọ ahịa. Oke Osimiri Ukwu bụ New 'UFO Style', obere na olu na ibu, ogologo na-adịgide adịgide ma na-arụ ọrụ nke ọma na ihe ọhụrụ ahụ bụ karịa kọmpat na-enweghị ịchụ àjà arụmọrụ. na 100W High Bay oriọna zọpụta ọkụ eletrik ma dochie ochie Metal Halide, HID ma ọ bụ CFL bulbs na ọhụrụ UFO High Bay LED ìhè.
Oke Osimiri Ukwu Egwu 100 Watt dị elu 100W Na-enwu n'Ọdịnihu 100W Elu Bay Elu Osimiri Ukwu